News – Shwe Yoe
သူ့ကို ဖမ်းမမိ လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကလူတွေကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေ တဲ့ ဦးဇင်းကေသရ
Shwe Let | June 5, 2021
ဦးဇင်းဘဝကနေ လူထွက်ပြီး ပြည်သူဘ က်တော်သား တော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့ ဦးဇင်းကေသရကိုတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး..။ အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက် တောထဲတောင်ထဲမှာ လက်နက်ကိုင်ကာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကြိုးစားတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ၁၃နှစ်ကြာ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကာ ကောင်းမှုပြုခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင်နေရတဲ့ ဦးဇင်းကေသရကတော့ သူ့ကိုဖမ်းမမိတာကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကလူတွေကို
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို သွားရောက်အားပေးရင်း လိုအပ်နေတာလေးတွေကို ဝိုင်းဝန်း ကူညီလှူဒါန်းပေးဖို့ တိုက်တွန်းလာတဲ့ MMA ကစားသမား Antoniyar
အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အမှန်တရားကိုလိုလားကြတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဘက်ပေါင်းစုံက အနုပညာများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု နာမည်ကြီး အားကစားသမားတွေလည်း တစ်သားတည်းရပ်တည်ပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ပြည်သူတွေနဲ့ အပြည့်အဝရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ အားကစားသမားတွေထဲမှာ MMA ဖိုက်တာကစားသမား ကယန်း တိုင်းရင်းသူလေး Bozhena Antoniyar လည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bozhena Antoniyar ဟာ ယခုဆိုရင်
ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကုသိုလ်ရပါသလား
Shwe Let | June 2, 2021
မရပါဘူး အမျိုးသားတွေ အထူးသတိပြုစရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲလို့ စာမှာ ဆိုပါတယ်။ အချို့ကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ လှူဒါန်းတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းမလှူရင် ယောင်္ကျားလဲ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ပစ္စည်းကို ဘယ်သူရှာတယ် ဘယ်သူပိုင်တယ် ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သေလို့ သပိတ်သွတ်တဲ့အခါ သေသူပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့လှူလို့ သေသူ ကုသိုလ်မရပါဘူး။
မြန်မာ့အရေးပါ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမယ့် အာဆီယံ – အမေရိကန် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး ကို နည်းပညာအခက်အခဲကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရ
Shwe Let | May 31, 2021
အာဆီယံ – အမေရိကန် သံတမန်ခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးပွဲတရပ်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့် နည်းပညာအခက်အခဲအကြောင်းပြချက်နဲ့ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့ အာဆီယံသတင်းရင်းမြစ်တွေအရ သိရပါတယ်။ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင့်ကင် နဲ့အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုဦးတည်နေတဲ့ လေယာဉ်တစင်းပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ကြောင့်
လက်ဆစ်လေးတွေ ညိုနေ ရင် ဒီ လို ရှင်း လိုက်နော်
Shwe Let | May 17, 2021
လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျော့နေပြီလား။ မျက်နှာလေးကတော့ဖြူဝင်းနေပေမယ့် လက်ချောင်းလေးတွေ ညိုမဲနေရင်းလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ မျက်နှာကိုပဲ ဂရုစိုက်ရုံနဲ့ အလှအပဟာ ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိပါဘူး။ လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေညိုမဲနေပြီး လက်သည်းနီခြေသည်းနီ လှလှလေးတွေ ဆိုးထားပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်လက်ချောင်းလေးတွေက လှပနေမှာ မဟုတ်သလို ယုံကြည်မှုတွေလည်း ပိုတိုးမလာတာတော့ သေချာပါတယ်။ နေလောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေ ညိုမဲနေတာတွေအတွက် သံပုယိုသီးကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ အသုံးပြုနည်း
အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ေ.ဝဒန.ာတွေ ခံစားနေရလို့ အလှူရှင်လိုအပ်နေတဲ့ လှိုင်မြို့နယ် က ညီလေးအောင်ခန့်ပိုင်
Shwe Let | May 11, 2021
ဓာတ်ပုံဆရာအောင်ရဲလင်းဟာ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်နဲ့ အိပ်ယာထ.ဲလ.ဲနေရတဲ့ အောင်ခန့်ပိုင်အတွက်အလှူငွေ သွားရောက်လှူဒါန်းပေးသလို လူငယ်လေးအတွက် အလှူရှင်ရအောင်လည်း နိဗ္ဗာန်ဆော်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ တန်းအရွယ်ကတည်းက စတင်ခံ.စ.ား နေရတဲ့ေ.ဝဒန.ာတွေဟာ လက်ရှိအသက် ၁၉ နှစ်တိုင်အောင် မပျောက်ကင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ စေတနာရှင် အလှူရှင်တွေကလည်း တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပေးကြသလို နောက်ထပ်အလှူရှင်တွေ ရဖို့အတွက် လာရောက်လှူဒါန်းသူတွေက ကူညီပေးကြပါတယ်။ လူငယ်လေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကို
အိမ်ေ.ဖ.ာက်ထ.ွင်းအခ.ိုးခ.ံရလို့ ရဲစခန်းတိုင်တာ ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ချင်ဖွင့်၊ မဖွင့်ချင်နေ အခ.ိုးခ.ံရတဲ့သူမှာ ဘဲ တာဝန်ရှိကြောင်း ပြော
Shwe Let | April 19, 2021
ပုသိမ်မြို့ အမှတ် ၅၁၅ စကားဝါလမ်း ကိုးသိန်းရဲစခန်းဝန်းအနီးရှိ AELC ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းအား ဧပြီလ (၁၂)ရက်နေ့က သ.ူခ.ိုးများဖေ.ာက်ထ.ွင်းဝင်ရောက်ကာ Hisense smart TV၂ လုံး၊ မီးအားမြှင့်စက်လုံး ၃ လုံး၊ Motherboard2လုံး၊ Amplifier 1 လုံး၊ EVDစက်2လုံးနှင့် CCTV Cameraများအားယူဆောင်သွားပြီး
သင့်အ သက်ဘယ်လောက် လဲ? ဘာနေ့မွေး လဲ? သာ မှန် မှန်ပြော ပါ
Shwe Let | April 8, 2021
သင့်အသက်ဘယ်လောက်လဲ? ဘာနေ့မွေးလဲ?သာမှန်မှန်ပြောပါ မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ….ဇနကဟောကိန်း ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ် စ သော အခြားတွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော ဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း
စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို စားသောက်ကုန်တွေသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်တို့ ချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့
Shwe Let | April 5, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ရယ်စရာဟာသဇာတ် ရုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့ကိုလည်း တည်ထောင် ထားပြီး လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လပိုင်း ကတည်းက လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တာလေးတွေကိုလည်း အားဖြည့်လှူဒါန်းရင်း တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ တတ်နိုင်လောက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်တို့ ချွန်တွန်းအဖွဲ့ကတော့
Shwe Let | March 31, 2021
ပြည်သူများ စုပေါင်းကာ Federal Army ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် CRPH (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ) ကို ဝိုင်းဝန်း ကာ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်မှ လှူဒါန်းလျက် ရှိကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ အလှမယ် နှင်းသွေးယုအောင်ကလည်း သူ့ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ “Miss Universe Myanmar 2018” သရဖူကို ရောင်းပြီး လှူ